Obboleessa: Fiqaaduun sooma Filsataa booda Finfinneetti deebi'uuf ture - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright BOGAS TUBE
Goodayyaa suuraa Artii Itoophiyaa keessatti qooda hin dagatamne ba'eera
Reeffii Artist Fiqaaduu Takilamaariyaam gara Finfinneetti dhufee akka jiru matiin isaa BBC'f ibsaniiru.
Artiist Fiqaaduun kaleen isaa lamaan dhukkubsachuun erga itti himamee booda, yaalii kalee miiccuu osoo hin eegaliin dura yalii amantaaf gara kaaba Itoophiyaa magaalaa Kombolchaatti imale.
"Amantii isaa irratti ejjennoo cimaa qaba," jedha obboleessi isaa kun.
Lafa xabalaa ji'aaf guyyaa torba ture haadha warraasaa waliin turuu kan dubbatu obolleessi Fiqaaduu yeroo yeroon bilbilaan dubbisaa ture.
Artist Fiqaaduu Takilamaariyaam boqote
"Fiqaaduun yalii amantaa utuu taasisuu fayyaan isaa deebi'ee ture, achii boodas yalii Itoophiyaa alatti itti fufuuf murteessee ture."
Fikaaduun halli fayyaa isaa garii akka ture himee sooma Filsata fixee gara Finfinneetti nan deebi'a jedhee utuu yaaduu lubbuun isaa dabarte jedha.
"Akka seera gadaamiitti namni achi keessatti du'e reeffi isaa hin ba'u garuu gadaamiin kun heedduu nu gargaaraniiru."
Fiqaaduun mucaa sabaati, kanaaf sabni ifaan akka awwaallatuuf reeffa isaa nu kennaniiru," jechuun dubbata Girmaan.
Kaleessa dhaqeen ija isaa ilaala jedhee tikeeti xiyyaraa kutadheen ture. Garuu Kombolchaa geenyee bokkaan ciima roobaa waan tureef xiyyarii bu'uu waan hin dandenyeef gara Finfinneetti deebinees jedha.
"Anaaf Oboleessikoo hiriyyaakoodha, abbaakoodhas. Akkasiittan isa ibsa."
Koreen gargaarsa walitti qabaa ture, matii waliin ta'uun haala awwaalcha isaa Bataskaanaa Kaatediraala Qidist Sillaaseetti tasiifamu mijeessaa jira.
Jabaadhu ni fayyinaa naan jedhee ture
Fiqaaduu yaliin akka barbaachisu erga beekamee booda, qarshiin walitti qabamaa ture, nama kalee gumaachus barbaada turani.
Yeroo kanatti akkumaa isaa dhukkuba kaleen rakkachaa kan turte waa'ee shamarree Meelat Assaffaa yeroo dhaga'u, qarshii isaaf sassaabame 200,000 Meelaatiif akka laatamu taasise.
"Qarshiin kun yeroo hin eegneefi harkaa homaa hin qabnetti waan gaarii naaf godhe baay'een isa galateeffadha," jetti Meelaat waa'ee Fiqaaduu yeroo dubbattu.
Gatiin kalee dhiquu biyya keenyatti heddu mi'aadha, inni garuu heddu na gargaare. Amma hospitaala Koriyaatti yaalamaan jira.
Jireenya kootiin gammadaa ta'us, nyaata biyyaan yaada
Yeroo dhumaaf isa haasofne nan yaadadha, 'jaabadhuu ni fayyina' naan jedha ture.
Fayyee wal agarra jedhee yaadeen ture garuu hin ta'iin hafe.
Tasfaayee Abbabaa wiirtuu leenjii isaaniin namoota dandeetti qaban baay'ee baasaniiru. Fiqaaduun immoo firiiwwn isaanii keessaa isa tokkodha. Waaa'eesaas akkasitti dubbatu.
"Ijoollummaasaatti nabiratti ture kan leenji'e. Yeroos hiriyyaasaa Suraafeel jedhamu wajjin bara 1965 tti ture kan dhufan."
Taatoo ta'uu isaarrayyuu sirbas ni yaala, jedhu.
"Ana bira yeroo dhufu umriisaan ol waan hunda irratti hirmaata ture. Faarfannaafi diraamaa irrattis ni hirmata ture. Achiin hiriyyoota isaa wajjiin gara mana qopheessaa Finfinnee deeman," jedhu Obbo Tasfaayeen.
Do'ii Tsagaayyee Gabiramadihin ''Tewoodiroos'' jedhu Tediroosiin tahee nama taphatedha. Dandeettii ajaay'baa qaba.
Filmiin erga guddachaa dhufes fiilmiiwwan gurguddoo baayyee irratti hojjeteera. Dhiyoo kanatti immoo na wajjin diraamaa 'Malaket' jedhamu wajjiin hojjenneerra, jedhu Obbo Tasfayeen.
Fiqaaduun jiruufi jireenya isatti nama amanamaafi kan nama kabaju ture. Oguma kanaafis kan dhaabbate ture. Dhukkuba kaleedhaan du'aaf gaheera. Nutis gadda guddaa irra jirra.
Nama nama dhukkubstau gaafatu, namni du'ee jedhee dafee kan gahu dha. Gara laafessaafi nama ifaa ture. Yoo itti haasoftus si kofalchiisa, dallansuu hin beeku.
Filmiin Tewoodiroos Tashooma ''Guddifachaa'' jedhu hojiiwwan innii irratti hirmaate keessa kan eeramu dha. Tewoodiroosis erag Fiqaaduun dhukkubsatee booda koree qarshii walitti qabduu keessa jira. Akkas jedheera.